प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली प्रस्थान « Janata Samachar
प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली प्रस्थान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली बिहिबार दिल्ली प्सथान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली जानुभएको हो ।
भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव लगायतको सहभागिता छ ।
मोदीले आफ्नो सपथग्रहणमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रलाई निम्त्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका नाताले मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनु भएको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग राजदूत निलाम्बर आचार्य र सल्लाहकार डा. भट्टराई सहभागी हुनुहुनेछ। आचार्य र भट्टराई ईपीजीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।